अहिले संसार नै कोरोनाभाइरसले आक्रान्त भएको बेलामा भाइरस कसले र कसरी फैलायो भन्ने विषयमा अनेकथरी षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यमहरूमा देखिन थालेका छन् ।
मनोविद्हरूका अनुसार, विश्लेषणात्मक सोच नभएका अनि आफूलाई अद्वितीय ठान्ने मानिसहरूले षड्यन्त्र सिद्धान्त अंगीकार गर्छन् । अरूलाई थाहा नभएको रहस्य आफूलाई थाहा छ भन्ने गलत सोच पालेका यस्ता व्यक्ति कुनै पनि घटनालाई रहस्यमय र सनसनीखेज बनाउन खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू अनौठा सिद्धान्तहरू बाहिर ल्याइरहेका हुन्छन् ।
एकथरीले यो चीनले वुहानमा बनाएको जैविक हतियार हो भनी हौवा फैलाए । चीन सरकारले वुहानमा कोरोना संक्रमण भएको कुरालाई शुरूमा दबाएको र पछि स्वीकार गरेको स्थितिमा षड्यन्त्र सिद्धान्तकारहरूलाई झन् मसला प्राप्त भयो । अनि कोरोना महाव्याधिका विषयमा सचेत गराउन खोज्ने सूचनादाताहरू र आठजना चिकित्कसहरूलाई कारवाही गर्ने र तिनको आवाज दबाउने काम पनि चिनियाँ सरकारले गरेको भनी पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले खबर दिए । त्यसले पनि यो भाइरस चीनको जैविक हतियार भएको गलत दाबीलाई बल पुर्‍यायो ।
यस षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई मलजल गर्नका लागि हल्लाखोरहरूले अमेरिकी उपन्यासकार डीन कून्जको सन् १९८१ मा प्रकाशित पुस्तक दी आइज अफ डार्कनेसको एक अनुच्छेदलाई उद्धृत गरे । उक्त अनुच्छेदमा वुहानको एक प्रयोगशालामा भाइरस निर्माण गरेर संसारभरि फैलाइएको भनी लेखिएको छ । उक्त अनुच्छेदको स्क्रीनशट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । पछि चाहिँ फेसबूक, ट्विटर लगायतले त्यस स्क्रीनशटमाथि पारदर्शी कालो स्क्रीन राखी झूटो सामग्री भनी प्रयोगकर्तालाई सचेत गराए ।
हुँदाहुँदा चीनले विकसित गरेको ५जी प्रविधिमार्फत भाइरस फैलिएको भनेर समेत हल्ला फैलाइयो । अमेरिकाका एक गायक केरी हिल्सनले लगालग ट्वीटहरू लेख्दै ५जी प्रविधि बाट निस्कने विकिरणका कारण मानिसहरू भुइँमा ढल्ने गरेको लेखे । अनि त्यसलाई पत्याएर धेरै मानिसले शेयर गरे तर विज्ञहरूले मानव स्वास्थ्यका लागि ५जी हानिकारक छ भन्ने विषयमा कुनै प्रमाण फेला नपरेको बताए ।
यसरी चीनका विरुद्ध षड्यन्त्र सिद्धान्तकारहरूले अनेकथरी भ्रम फैलाएपछि चिनियाँहरूले पनि आफ्नै किसिमका षड्यन्त्र सिद्धान्त अघि सारे । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले अनेकौं ट्वीट गर्दै अमेरिकामा कोरोनाभाइरसको पहिलो बिरामी फेला परेको अनि अमेरिकाले त्यसलाई दबाएको आरोप लगाए । उनको भनाइ सार्वजनिक भएसँगै चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा गत वर्षको अक्टोबर महिनामा वुहान आएका अमेरिकी सैनिकहरूले कोरोनाभाइरस सारेको भन्ने हल्ला चल्न थाल्यो ।
तर नेचर मेडिसिन जर्नलले भाइरसको जिनोमको अध्ययन गर्दा यो कुनै प्रयोगशालामा बनाइएको जैविक हतियार हो भन्ने विषयमा कुनै प्रमाण फेला नपरेको भनी स्पष्ट पारेको छ । तर गम्भीर सामग्री प्रकाशित गर्ने जर्नलको कुरा सर्वसाधारणले पत्याइरहेका छैनन् ।
रुस र इरानमा पनि कोरोनाभाइरसका बारेमा अनेकौं षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू अघि सारिए । भाइरस अमेरिकाको जासूसी संस्था सीआईएले लाटभियाको एक प्रयोगशालामा बनाएको जैविक हतियार हो र संसारलाई मानवरहित बनाउन अमेरिकाले गरेको षड्यन्त्र हो भन्ने हल्ला पनि फैलाइए । अनि आर्थिक संकटमा पर्न लागेका पश्चिमी मुलुकहरूले अर्थतन्त्र बचाउनका लागि नगद छाप्ने बहाना खोजिरहेकोमा भाइरसले उनीहरूलाई सहयोग गरेको भनेर समेत लेखियो । अमेरिकाका ठूला औषधि कम्पनीहरूले कोरोनाविरुद्धको औषधि र खोप संसारभरि बेचेर अकुत सम्पत्ति जोड्नका लागि भाइरस फैलाएको भनी लेख्ने पनि भेटिएका छन् ।
इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव अली शामखानीले एउटा ट्वीट लेख्दै अमेरिकाले अरूलाई दोष लगाउनु भन्दा पनि कोरोनाभाइरस बनाएको र फैलाएकोमा आफ्नो भूमिकाका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भने ।
यसरी विभिन्न मुलुकले आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला चलाएका छन् भने सर्वसाधारणले षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू फैलाउँदैछन् । यस्ता गलत सूचना फैलाउनुको के उद्देश्य हुन सक्छ ?
यो दुईथरी व्यवस्थाबीच संघर्षको परिणाम हुनसक्छ । पश्चिमी व्यवस्थाप्रति पश्चिमकै मानिसमा विश्वासको संकट परिरहेको अवस्थामा सरकारहरूप्रतिको अविश्वास झनै बढोस् भन्ने ध्येयका साथ रुस, चीन र इरानले यस्ता गलत सूचना प्रवाह गरेका हुन सक्छन् ।
उता पश्चिमी मुलुकहरूले पनि महाशक्ति राष्ट्र बन्न उत्सुक चीनलाई तल पार्न र त्यहाँका जनताप्रति संसारमा घृणा फैलाउन षड्यन्त्र सिद्धान्त ल्याएका हुन सक्छन् । राष्ट्रपति सी चिनफिङले महाव्याधि रोक्नका लागि उचित कदम नचालेको भन्दै कडा आलोचनाहरू भइरहँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध जनता जागून् भन्ने उद्देश्य पश्चिमले लिएको छ तर पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा चिनियाँहरूको पहुँच नदिइएकाले त्यसरी विद्रोह जगाउन लगभग असम्भव छ ।
त्यसमाथि पश्चिमी मुलुकहरूलाई भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि लगाइएको लकडाउनले अप्ठ्यारो पारिरहेको स्थिति छ । मानवअधिकारका कुरा अघि सार्दै हिँडडुलको स्वतन्त्रता हनन भएको अनि व्यक्तिमाथि राज्य हावी हुन थालेको भनी गनगन गरे पनि संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन सर्वोत्तम उपाय हो भन्ने देखिएको छ चाहे त्यसले मानवअधिकारको उल्लंघन गरोस् ।
मानव रहे पो मानवअधिकार ? भाइरसले मानव मार्दा मानवअधिकारलाई थाती राख्नुपर्ने हुन्छ । (मानवअधिकारको अभ्यास गर्ने इटलीमा मानिसहरूले सरकारको निर्देशन नटेरी हिँडडुल गरेकाले व्यापक मात्रामा संक्रमण फैलिएको र मृत्युदर बढेको प्रमाणित भइसकेको छ ।)
चीनले लकडाउन लगाएर भाइरस संक्रमण रोक्न सफल हुँदा पश्चिमी मुलुकहरूले पहिला विरोध गरे तर अहिले त्यही उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन् । अब उनीहरूले चीनलाई कसरी विरोध गर्ने ? त्यसैले भाइरस फैलिनुमा चीनकै दोष छ भनी उनीहरू आरोप र षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिरहेका हुन् ।
प्रत्येक महामारीले मानिसमा डर उत्पन्न गराउँछ र डरले घृणालाई जन्म दिन्छ । त्यही घृणाले गर्दा मानिसले आफूइतरको समुदायमाथि अनेकौं आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेको हुन्छ । षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू पनि त्यसैका उपज हुन् ।
अहिले उत्पन्न डरले मानवजातिलाई अविवेकी षड्यन्त्र सिद्धान्त बनाउन तथा दोषरोपण गर्ने पात्रको खोजीमा लाग्न प्रेरित गरेको हो । तर यो डरले मानिसहरूलाई जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार देखाउन अनि इतर समुदायका मानिसप्रति सम्मानको भाव देखाएर एकजुट भई महाव्याधिविरुद्ध लड्न प्रेरित पनि गरिरहेको छ ।
घृणावादी षड्यन्त्र सिद्धान्तकारहरू जतिसुकै वाचाल भए पनि मानवताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेका असल आत्माहरू संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन् । यसले मानवताप्रति आशाको सञ्चार गराएको छ ।